Wafdi Ka Socda Wasaaradda Caafimaadka Dalka Turkiga Oo Muqdisho Soo Gaaray – idalenews.com
Wafdi ka socda Wasaaradda Caafimaadka dalka Turkiga ayaa barqanimadii maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda ayadoo wafdigaasina ay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cade kusoo dhaweeyeen mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Hormarinta iyo Adeegga Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.
Wafdigan ka socday Wasaaradda Caafimaadka dalka Turkiga ayaa waxaa hogaaminayey Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka dalkaasi ayaga oo kulammo ku aadan hormarinta caafimaadka dalkeenana la qaatay mas’uuliyiin uu ka mid yahay Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Hormarinta iyo Adeegga Bulshada Xukuumadda Soomaaliya Mudane Bashiir Maxamed Jaamacad.
Sidoo kale wafdigan ayaa u yimid Muqdisho sidii ay u ogaan lahaayeen baahida dhanka caafimaad ee ka jirta Muqdisho si gaar ahna dad dhaawacyo culus qaba oo aan gudaha magaalada Muqdisho wax looga qaban karin kuwaasi oo ay sheegeen iney u fidin doonaan gacan caafimaad oo dibadda ah.
Horey ayey dowladda Turkigu gurmad caafimaad oo dalka dibaddiisa ah ugu sameysay dad badan oo Soomaaliyeed kuwaasi oo xaaladahooda caafimaad wax looga qaban waayey gudaha dalka.
Maamulka G/Baay oo ka warbixiyay amaanka gobolkaasi